मरिसकेका मानिसहरू फेरि जीवित हुनेछन्‌!
लेखको भाषा अकोली अखा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अजा अटेसो अट्टी अफ्रिकान्स अबुइ अब्खाज अब्बे अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्टाइ अल्बेनियन आइभोरियन साङ्केतिक भाषा आइरिस आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबान इबानाग इबिन्डा इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उङ्बन्डी (उत्तरी) उज्बेक उज्बेक (रोमन) उड्मुर्त उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एङ्गोलन साङ्केतिक भाषा एडो एफिक एम्बेरा (साटिओ) एसान एस्टोनियन ओक्पे ओटेटेला ओडिया ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काजाक (अरबी) कान्योक काबार्डिन-सर्केस काबीय काबुभरदियानु काम्बा कालेनजिन किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किकोङ्गो या लेटा किटुबा किनान्डे किन्यारवान्डा किपेन्डे किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी किसीई किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (टिना) कुइचुआ (पास्टाजा) कुइचुआ (सान्टिआगो डेल एस्टेरो) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यानगोन्डे क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा खाकस खाना गा गाउरानी गाउरानी (बोलिभिया) गालिसियन गिटोंगा गियानिज क्रिओल गुएरे गुर्जे गून गोकाना ग्रीक ग्वाडेलोपिएन क्रिओल चङ्गाना (जिम्बावे) चाङगाना (मोजाम्बिक) चाभाकानो चिगा चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (जोटुङ) चीन (टिडिम) चीन (हाका) चुभास चुवाबो चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोपी चोल चोवे जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जाम्बियन साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टान्ड्रयो टालियन टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टुभिनियन टेटन डिली टेवे टोंगन डच डाँग्मे डायाक ङाजु डिगोर डुआला डुसुन डेनिश ड्रेहु तरहुमरा (मध्य) ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई थाई साङ्केतिक भाषा दामारा नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेङ्गोने नेपाली नेपाली साङ्केतिक भाषा नोंगा न्दौ न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी (शाहमुखी) पिजिन (क्यामरून) पिजिन (पश्चिम अफिका) पेल्ले पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फान्टे फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिम्बी फुटुना (पुर्वीय) फेरोई फ्रान्सेली बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाटाक (सिमालुङ्गुन) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बासा (लाइबेरिया) बास्क बिकोल बियाक बिस्लामा बेते बेलिज क्रिओल बोउलो बोलिभियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भियतनामिज साङ्केतिक भाषा भेजो भेन्डा मङ्गोलियन मझाहुआ मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मलावी साङ्केतिक भाषा मले मलेसियन साङ्केतिक भाषा मल्यालम माकुवा माकोन्डे माक्हुवा-मीट्टो माखुवा-सिरिमा मान्यावा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मारी मालागासी माल्टिज माशी मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिजो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्डे मेरू म्यानमार म्यानमार साङ्केतिक भाषा याकुबा युक्रेनियन योरूबा रापा नुई रारोतोंगान रियुनियन क्रिओल रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रोङ्गा रोमानियन रोमानियन साङ्केतिक भाषा रोमानी (उत्तरी ग्रिस) रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (पूर्वी स्लोभाकिया) रोमानी (बुल्गेरिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक रोमानी (लोभारी, हङ्गेरी) रोमानी (सर्बिया) लहु लाओशियन लाम्बा लाम्ब्या लारी लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुन्डा लुभेल लेगा लेन्जे लेन्डू लोम्वे लोलो वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे विची वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सङ्गीर साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेङ्गा (जाम्बिया) सेङ्गा (मोजाम्बिक्) सेत्स्वाना सेना सेपुलाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस स्विडिस साङ्केतिक भाषा हंगेरियन हन्स्‌रिक हाइटियन क्रिओल हाभु हाया हिन्दी हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
१-३. (क) हामी सबै जना केको कैदमा छौँ? (ख) यहोवा परमेश्‍वरले मृत्युलाई के गर्नुहुनेछ?
तपाईँलाई कसैले झूटो आरोप लगाएर आजीवन कैद सजाय दियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ अँध्यारो भविष्यबाहेक केही देख्नुहुन्‍न होला अनि असाध्यै निराश पनि हुनुहोला। तर यसरी पूरै आशा मारिसकेको बेला एक जना मानिस आएर तपाईँलाई कैदबाट निकाल्ने वचन दियो अनि ऊसित तपाईँलाई कैदबाट छुटाउने क्षमता पनि छ भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ?
२ हामी सबै जना मृत्युको कैदमा परेका छौँ। हामीले जतिसुकै कोसिस गरे तापनि त्यसबाट मुक्‍त हुन सक्दैनौँ। तर यहोवा परमेश्‍वर हामीलाई मृत्युबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले यसो भन्‍नुभएको छ: “सबैभन्दा अन्तमा नामेट पारिने शत्रु मृत्यु हो।”—१ कोरिन्थी १५:२६.
३ मृत्युसित डराउनै नपर्ने समय आएपछि कत्ति ढुक्क महसुस होला, कल्पना गर्नुहोस्‌ त! यहोवा परमेश्‍वरले मृत्युलाई हटाउनुका साथै मरिसकेका मानिसहरूलाई मृत्युबाट ब्युँताउनुहुनेछ। यो कुरा थाह पाएर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? “मृत्युको पन्जामा परेर निस्सहाय भएकाहरू” फेरि जिउनेछन्‌ भनेर यहोवा परमेश्‍वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।—यसैया २६:१९.
आफूले माया गरेको व्यक्‍तिको मृत्यु हुँदा
४. (क) परिवारको कुनै सदस्य वा साथीभाइको मृत्यु हुँदा हामीलाई केले सान्त्वना दिन्छ? (ख) येसुका केही घनिष्ठ साथी को-को थिए?
४ परिवारको सदस्य वा साथीभाइको मृत्यु हुँदा त्यसको चोट सहन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। हामी लाचार महसुस गर्छौँ। हामीले लाख कोसिस गरे पनि मरिसकेको व्यक्‍तिलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। तर यस्तो बेला बाइबलले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ। (२ कोरिन्थी १:३, ४ पढ्‌नुहोस्‌) यहोवा परमेश्‍वर र येसु मरिसकेका हाम्रा प्रियजनलाई मृत्युबाट ब्युँताउन कत्तिको इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न एउटा घटना विचार गरौँ। येसु पृथ्वीमा हुनुहुँदा उहाँ लाजरस र उनका दिदीहरू मार्था र मरियमलाई भेट्‌न जाने गर्नुहुन्थ्यो। उनीहरू तीनै जना येसुका घनिष्ठ साथी थिए। बाइबल भन्छ: “मार्था, तिनकी बहिनी र लाजरसलाई येसु माया गर्नुहुन्थ्यो।” तर एकदिन लाजरसको मृत्यु भयो।—युहन्‍ना ११:३-५.
५, ६. (क) लाजरसको परिवार र साथीभाइले शोक गरिरहेको देखेर येसुले के गर्नुभयो? (ख) मृत्युबारे येसु कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भनेर थाह पाउनु हाम्रो लागि किन सान्त्वनादायी छ?
५ येसु मार्था र मरियमलाई सान्त्वना दिन जानुभयो। येसु आउँदै हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा सुनेपछि मार्था उहाँलाई भेट्‌न सहरबाहिर निस्किन्‌। येसुलाई भेट्‌न पाउँदा उनी धेरै खुसी भइन्‌ अनि यसो भनिन्‌: “तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन।” येसु चाँडै आउनुभएको भए उहाँले भाइलाई निको पार्नुहुन्थ्यो भन्‍ने मार्थालाई लागेको थियो। येसुले मार्थाकी बहिनी मरियम रुँदै गरेको पनि देख्नुभयो। उनीहरूको पीडा देखेर येसु दुःखी हुनुभयो र रुनुभयो। (युहन्‍ना ११:२१, ३३, ३५) आफूले माया गरेको व्यक्‍ति गुमाउनुपर्दा त्यसको चोट कति गहिरो हुन्छ, येसुले महसुस गर्नुभयो।
६ मृत्युको कारण कसैलाई गुमाउनुपर्दा हुने पीडा येसुले बुझ्नुहुन्छ भनेर थाह पाउनु हाम्रो लागि धेरै सान्त्वनादायी कुरा हो। येसु आफ्नो बुबाजस्तै हुनुहुन्छ। त्यसैले यहोवा परमेश्‍वर पनि हाम्रो पीडा बुझ्नुहुन्छ भन्‍ने कुरामा हामी ढुक्क हुन सक्छौँ। (युहन्‍ना १४:९) यहोवा परमेश्‍वरसित मृत्युलाई सधैँभरिको लागि हटाउने शक्‍ति छ र उहाँले चाँडै त्यसो गर्नुहुनेछ।
“ए लाजरस, बाहिर आऊ!”
७, ८. मार्थालाई चिहानबाट ढुङ्‌गा हटाउन किन उचित लागेन? तर येसुले के गर्नुभयो?
७ येसु लाजरसलाई राखिएको चिहानमा जानुहुन्छ र चिहानको मुख थुन्‍न राखिएको ठूलो ढुङ्‌गा हटाउन लगाउनुहुन्छ। तर मार्थालाई ढुङ्‌गा हटाउन उचित लाग्दैन। किनभने लाजरसलाई चिहानमा राखिएको चार दिन भइसकेको थियो। (युहन्‍ना ११:३९) येसुले के गर्न लाग्नुभएको थियो, मार्थालाई थाह थिएन।
लाजरसलाई फेरि जीवित पारिँदा तिनका परिवार र साथीभाइहरू कति खुसी भए होलान्‌!—युहन्‍ना ११:३८-४४
८ मानिसहरूले चिहानको ढुङ्‌गा हटाइसकेपछि येसु यसो भन्दै लाजरसलाई बोलाउनुहुन्छ: “बाहिर आऊ!” तब मरिसकेको लाजरस “हातखुट्टा कपडाले बेरिएकै अवस्थामा उठेर आयो।” (युहन्‍ना ११:४३, ४४) लाजरस फेरि जीवित भयो! त्यो देखेर मार्था र मरियम चकित भए। अनि परिवार र साथीभाइ सबैले लाजरसलाई फेरि भेट्‌न पाए। उनीहरूले उसलाई अँगालो हाल्न, छुन र ऊसित कुरा गर्न सके। कस्तो अचम्मलाग्दो कुरा, होइन र? यसरी येसुले लाजरसलाई मृत्युबाट ब्युँताउनुभयो।
“ए नानी, म तिमीलाई भन्छु, उठ!”
९, १०. (क) मानिसहरूलाई जीवित पार्ने शक्‍ति येसुले कसबाट पाउनुभयो? (ख) मृत्युबाट ब्युँताइएका मानिसहरूबारे बाइबलमा दिइएको विवरणले हामीलाई कस्तो आशा दिन्छ?
९ के येसुले आफ्नै शक्‍ति चलाएर मरेको मानिसलाई फेरि जीवित पार्नुभएको थियो? अहँ, थिएन। लाजरसलाई मृत्युबाट ब्युँताउनुअघि येसुले यहोवा परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो अनि परमेश्‍वरले लाजरसलाई फेरि जीवित पार्ने शक्‍ति येसुलाई दिनुभयो। (युहन्‍ना ११:४१, ४२ पढ्‌नुहोस्‌) तर मृत्युबाट ब्युँताइएको मानिस लाजरस मात्र थिएन। बाइबलले १२ वर्षकी एउटी केटीबारे पनि बताउँछ, जो धेरै बिरामी थिई। उसको बुबा याइरस आफ्नी छोरीको हालत देखेर व्याकुल भएका थिए। त्यसैले तिनले आफ्नी छोरीलाई निको पारिदिनुहोस्‌ भनेर येसुलाई बिन्ती गरे। ऊ याइरसको एक मात्र सन्तान थिई। तर याइरसले येसुलाई बिन्ती गरिरहेको बेला केही मानिसहरू आए र यसो भने: “तपाईँकी छोरी मरिसकी! अब गुरुज्यूलाई किन बेकारमा दुःख दिने?” तर येसुले याइरसलाई भन्‍नुभयो: “चिन्ता नगर, केवल विश्‍वास गर अनि ऊ बाँच्नेछे।” त्यसपछि उहाँ याइरससँगै तिनको घरमा जानुभयो। त्यहाँ येसुले मानिसहरू रोइरहेको देख्नुभयो। उहाँले भन्‍नुभयो: “रुन छोड किनकि ऊ मरेकी छैन तर निदाइरहेकी छे।” ती केटीको बुबाआमालाई येसुले के भन्‍न खोज्नुभएको होला भन्‍ने लागेको हुनुपर्छ। त्यसपछि येसुले सबै जनालाई घरबाहिर पठाउनुभयो र ती केटीको बुबाआमालाई लिएर उसलाई राखिएको कोठामा जानुभयो। येसुले केटीको हात समात्दै यसो भन्‍नुभयो: “नानु, उठ!” ऊ तुरुन्तै उठी र हिँडडुल गर्न थाली! यो देखेर उसको आमाबुबालाई कत्ति खुसी लाग्यो होला, कल्पना गर्नुहोस्‌ त! येसुले तिनीहरूको मरिसकेकी छोरीलाई फेरि जीवित पार्नुभयो। (मर्कुस ५:२२-२४, ३५-४२; लुका ८:४९-५६) यहोवा परमेश्‍वरले येसुमार्फत आफ्नी छोरीलाई मृत्युबाट ब्युँताउनुभएको कुरा सायद तिनीहरूले कहिल्यै बिर्सेनन्‌ होला। *
१० येसुले मृत्युबाट ब्युँताउनुभएका मानिसहरू पछि फेरि मरे। तैपनि बाइबलमा यी मानिसहरूको विवरण पढ्‌दा त्यसले हामीलाई बलियो आशा दिन्छ। यहोवा परमेश्‍वर मरिसकेका मानिसहरूलाई फेरि जीवित पार्न चाहनुहुन्छ र उहाँले त्यसो गर्नु पनि हुनेछ।
मृत्युबाट ब्युँताइएका मानिसहरूको विवरणबाट हामी के सिक्न सक्छौँ?
पत्रुसले ख्रिष्टियन स्त्री डोरकासलाई फेरि जीवित पारे।—प्रेषित ९:३६-४२
एलियाले एउटी विधवाको छोरालाई फेरि जीवित पारे।—१ राजा १७:१७-२४
११. मरेकाहरूको अवस्थाबारे उपदेशक ९:५ ले के भन्छ?
११ “मरेकाहरूलाई . . . केही पनि थाह हुँदैन” भनेर बाइबलले स्पष्ट पारेको छ। लाजरसको मृत्यु हुँदा तिनको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। (उपदेशक ९:५) येसुले भन्‍नुभएझैँ लाजरस निद्रामा परेको मानिसजस्तै थिए। (युहन्‍ना ११:११) त्यसैले चिहानमा हुँदा लाजरसलाई “केही पनि थाह” थिएन।
१२. लाजरस साँच्चै जीवित भएका थिए भनी हामी किन भन्‍न सक्छौँ?
१२ येसुले लाजरसलाई ब्युँताउनुहुँदा धेरै मानिसले त्यो घटना देखेका थिए। येसुका शत्रुहरूलाई समेत यो अचम्मलाग्दो घटनाबारे थाह थियो। यसले लाजरस साँच्चै जीवित भएका थिए भनेर साबित गर्छ। (युहन्‍ना ११:४७) साथै धेरै जना मानिस लाजरसलाई भेट्‌न गए र येसु वास्तवमै परमेश्‍वरका छोरा हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले विश्‍वास गर्न थाले। तर येसुका शत्रुहरूलाई यो कुरा मन परेन। त्यसैले उनीहरूले येसु र लाजरस दुवैलाई मार्ने मतो गरे।—युहन्‍ना ११:५३; १२:९-११.
१३. मरिसकेको मानिसलाई यहोवा परमेश्‍वरले फेरि जीवित पार्नुहुनेछ भनेर हामी किन ढुक्क हुन सक्छौँ?
१३ येसुले “चिहानमा हुनेहरू सबै” फेरि जीवित हुनेछन्‌ भन्‍नुभयो। (युहन्‍ना ५:२८) यसको मतलब यहोवा परमेश्‍वरले आफ्नो सम्झनामा भएकाहरू सबैलाई फेरि ब्युँताउनुहुनेछ। तर मरिसकेको मानिसलाई फेरि जीवित बनाउन यहोवा परमेश्‍वरले उसको सबै कुरा सम्झेको हुनुपर्छ नि, होइन र? के परमेश्‍वरले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ? ब्रह्‍माण्डमा अरबौँ ताराहरू छन्‌, तैपनि यहोवा परमेश्‍वरलाई हरेक ताराको नाम थाह छ भनी बाइबल बताउँछ। (यसैया ४०:२६ पढ्‌नुहोस्‌) उहाँ त्यति धेरै ताराको नाम सम्झन सक्नुहुन्छ भने आफूले फेरि ब्युँताउन चाहेको मानिसहरूको सबै कुरा सम्झन सक्नुहुन्‍न होला र? अझ बिर्सन नहुने कुरा त के हो भने, यहोवा परमेश्‍वर नै सबै थोकको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँसित मरिसकेको मानिसलाई फेरि जीवित पार्ने शक्‍ति छ भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौँ।
१४, १५. मरिसकेका मानिसहरू फेरि जीवित हुनेबारे अय्युबका शब्दहरूबाट हामी के थाह पाउन सक्छौँ?
१४ अय्युब भन्‍ने परमेश्‍वरको एक जना वफादार सेवकले पनि उहाँले मरिसकेका मानिसलाई फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्‍वास गर्थे। उनले सोधे: “मानिस मरेपछि ऊ फेरि जिउँदो हुन सक्छ र?” त्यसपछि उनले यहोवा परमेश्‍वरलाई यसो भने: “तपाईँले मलाई बोलाउनुहुनेछ र म जवाफ दिनेछु। आफ्नो हातको सृजना हेर्न तपाईँले तीव्र इच्छा गर्नुहुनेछ।” हो, यहोवा परमेश्‍वर मरिसकेका मानिसहरू फेरि जीवित भएको हेर्न तीव्र इच्छा गर्नुहुन्छ भनेर अय्युबलाई थाह थियो।—अय्युब १४:१३-१५.
१५ मरिसकेका मानिसहरू फेरि जीवित हुनेछन्‌ भनेर थाह पाउँदा तपाईँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? सायद तपाईँ मरिसकेका आफ्ना परिवारका सदस्य अनि साथीभाइलाई सम्झनुहुन्छ होला। तपाईँलाई तिनीहरू फेरि जीवित होलान्‌ कि नहोलान्‌ जस्तो लाग्ला। मरिसकेका मानिसहरूलाई फेरि जीवित पार्न यहोवा साँच्चै इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर थाह पाउँदा हामी सान्त्वना पाउँछौँ। आउनुहोस्‌, परमेश्‍वरले क-कसलाई मृत्युबाट फेरि ब्युँताउनुहुनेछ र तिनीहरू कहाँ बस्नेछन्‌ भन्‍नेबारे बाइबलले के बताउँछ, विचार गरौँ।
तिनीहरूले “उसको स्वर सुन्‍नेछन्‌ र बाहिर निस्किआउनेछन्‌”
१६. परमेश्‍वरले भविष्यमा मरिसकेका मानिसहरूलाई फेरि जीवित पार्नुहुँदा तिनीहरूको जीवन कस्तो हुनेछ?
१६ विगतमा मृत्युबाट ब्युँताइएका मानिसहरूले यसै पृथ्वीमा आफ्ना परिवार र साथीभाइलाई भेट्‌न पाए। भविष्यमा पनि यस्तै हुनेछ। परमेश्‍वरले मरिसकेका मानिसहरूलाई यसै पृथ्वीमा ब्युँताउनुहुनेछ। तर तिनीहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा राम्रो हुनेछ। किन? किनभने यहोवा परमेश्‍वरले ज-जसलाई यस पृथ्वीमा फेरि जीवित पार्नुहुनेछ, उनीहरूले सधैँभरि बाँच्ने मौका पाउनेछन्‌। तिनीहरू फेरि मर्नुपर्ने छैन। अनि त्यतिबेलाको संसार अहिले हामी बाँचिरहेको संसारभन्दा धेरै फरक हुनेछ। त्यहाँ कुनै युद्ध, अपराध र रोगबिमार हुनेछैन।
१७. परमेश्‍वरले क-कसलाई फेरि जीवित पार्नुहुनेछ?
१७ यहोवा परमेश्‍वरले क-कसलाई फेरि जीवित पार्नुहुनेछ? “चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्‍नेछन्‌ र बाहिर निस्किआउनेछन्‌” भनेर येसुले बताउनुभयो। (युहन्‍ना ५:२८, २९) त्यसैगरि प्रकाश २०:१३ मा यसो भनिएको छ: “समुद्रले आफूसँग भएका मरेका मानिसहरू दियो। मृत्यु र चिहानले पनि आफूहरूसँग भएका मरेका मानिसहरू दिए।” हो, अरबौँ मानिसलाई जीवित पारिनेछ। प्रेषित पावलले पनि “धर्मी र अधर्मी दुवै”-लाई फेरि जीवित पारिनेछ भनेर बताए। (प्रेषित २४:१५ पढ्‌नुहोस्‌) धर्मी भनेको को हो अनि अधर्मी भनेको को हो?
मरेकाहरूलाई नयाँ संसारमा जीवित पारिनेछ र उनीहरूले आफ्ना प्रियजनलाई भेट्‌नेछन्‌
१८. मृत्युबाट ब्युँताइने “धर्मी” मानिसहरू को हुन्‌?
१८ “धर्मी” मानिसहरूमा येसु यस पृथ्वीमा आउनुअघिका यहोवा परमेश्‍वरका वफादार सेवकहरू पर्छन्‌। जस्तै: नुह, अब्राहाम, सारा, मोसा, रुथ अनि एस्तर। तिनीहरू सबैलाई यसै पृथ्वीमा फेरि ब्युँताइनेछ। तपाईँले हिब्रू अध्याय ११ पढेर यी पुरुष र स्त्रीहरूमध्ये कसै-कसैबारे थाह पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए अहिले हाम्रो समयमा मृत्युको निद्रामा परेका यहोवा परमेश्‍वरका वफादार सेवकहरूबारे चाहिँ के भन्‍न सकिन्छ? उनीहरू पनि “धर्मी” मानिसहरूमै पर्छन्‌, त्यसैले उनीहरूलाई पनि ब्युँताइनेछ।
१९. “अधर्मी” मानिसहरू को हुन्‌? यहोवा परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई कस्तो मौका दिनुहुनेछ?
१९ “अधर्मी” भनेको चाहिँ ती अरबौँ मानिस हुन्‌, जसले यहोवा परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने मौका कहिल्यै पाएनन्‌। तिनीहरू मरिसकेको भए तापनि यहोवा परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई बिर्सनुभएको छैन। उहाँले तिनीहरूलाई फेरि मृत्युबाट ब्युँताउनुहुनेछ अनि तिनीहरूले उहाँलाई चिन्‍ने अनि उहाँको सेवा गर्ने मौका पाउनेछन्‌।
२०. मरिसकेका सबैलाई किन फेरि जीवित पारिनेछैन?
२० के यसको मतलब जो-जो मरिसकेका छन्‌, तिनीहरू सबैलाई फेरि जीवित पारिनेछ? त्यसो त होइन। कसै-कसैलाई मृत्युबाट ब्युँताइनेछैन भनेर येसुले बताउनुभयो। (लुका १२:५) त्यसोभए कसलाई मृत्युबाट ब्युँताउने अनि कसलाई नब्युँताउने भनेर कसले निर्णय गर्नुहुनेछ? यहोवा परमेश्‍वर प्रमुख न्यायकर्ता हुनुहुन्छ तर “जिउँदा र मरिसकेका मानिसहरूको न्याय गर्न” उहाँले येसुलाई अख्तियार दिनुभएको छ। (प्रेषित १०:४२) दुष्ट ठहरिएका र परिवर्तन हुन नचाहेका मानिसहरूलाई परमेश्‍वरले मृत्युबाट ब्युँताउनुहुनेछैन।—नोट १९ हेर्नुहोस्‌।
कसै-कसैलाई मृत्युबाट ब्युँताएर स्वर्ग लगिनेछ
२१, २२. (क) मृत्युबाट ब्युँतेर स्वर्ग जाने मानिसहरूले कस्तो शरीर पाउनेछन्‌? (ख) मृत्युबाट ब्युँतेर स्वर्ग जाने पहिलो व्यक्‍ति को हुनुहुन्थ्यो?
२१ कोही-कोही स्वर्ग जानेछन्‌ भनी बाइबल बताउँछ। तर ज-जसलाई मृत्युबाट ब्युँताएर स्वर्ग लगिनेछ, तिनीहरूले मानव शरीर पाउनेछैनन्‌। बरु तिनीहरूलाई अदृश्‍य शरीर दिइनेछ।
२२ यसरी स्वर्ग जानेहरूमध्ये पहिलो व्यक्‍ति येसु हुनुहुन्थ्यो। (युहन्‍ना ३:१३) उहाँलाई मारिएको तीन दिनपछि यहोवा परमेश्‍वरले मृत्युबाट ब्युँताउनुभयो। (भजन १६:१०; प्रेषित १३:३४, ३५) तर येसुलाई मानव शरीरमा ब्युँताइएको थिएन। उहाँ “मानिसको रूपमा मर्नुभयो तर अदृश्‍य व्यक्‍तिको रूपमा ब्युँताइनुभयो” भनी पत्रुसले बताए। (१ पत्रुस ३:१८) परमेश्‍वरले येसुलाई मृत्युबाट ब्युँताएर शक्‍तिशाली स्वर्गदूत बनाउनुभयो। (१ कोरिन्थी १५:३-६) तर त्यसरी स्वर्ग जाने व्यक्‍ति उहाँ मात्र हुनुहुन्‍न भनी बाइबल बताउँछ।
२३, २४. येसुले भन्‍नुभएको “सानो बगाल” को हो र तिनीहरूको सङ्‌ख्या कति छ?
२३ आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अघि येसुले आफ्ना वफादार चेलाहरूलाई यसो भन्‍नुभएको थियो: “म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जाँदै छु।” (युहन्‍ना १४:२) येसुले आफ्ना अनुयायीहरूमध्ये कोही-कोही स्वर्ग जानेछन्‌ अनि उहाँसँगै जीवन बिताउनेछन्‌ भन्‍न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तिनीहरूलाई “सानो बगाल” भन्‍नुभयो। यसबाट स्वर्ग जाने मानिसहरूको सङ्‌ख्या थोरै रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। (लुका १२:३२) येसुका चेला युहन्‍नाले तिनीहरूको सङ्‌ख्या तोकेरै बताए। तिनले येसु स्वर्गको “सियोन डाँडामा उभिरहेको” दर्शन देखे र उहाँसित “१ लाख ४४ हजार जना थिए।”—प्रकाश १४:१.
२४ त्यसोभए १ लाख ४४ हजार जनालाई कहिले स्वर्ग लगिने थियो? ख्रिष्टले स्वर्गमा शासन गर्न थाल्नुभएपछि तिनीहरूलाई मृत्युबाट ब्युँताएर स्वर्ग लगिने थियो भनेर बाइबल बताउँछ। (१ कोरिन्थी १५:२३) हामी अहिले त्यही समयमा बाँचिरहेका छौँ र ती १ लाख ४४ हजार जनामध्ये धेरै जना स्वर्ग गइसकेका छन्‌। ती १ लाख ४४ हजार जनामध्ये जो-जो अहिले पृथ्वीमा जीवित छन्‌, उनीहरूलाई मृत्यु हुनेबित्तिकै ब्युँताएर स्वर्ग लगिनेछ। यो समूहमा नपर्ने अनगिन्ती मानिसहरू नि? परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई भविष्यमा मृत्युबाट ब्युँताउनुहुनेछ र सुन्दर पृथ्वीमा राख्नुहुनेछ।
२५. हामी अर्को अध्यायमा के सिक्नेछौँ?
२५ यहोवा परमेश्‍वरले अब चाँडै सबै मानिसजातिलाई मृत्युबाट मुक्‍त गर्नुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सधैँभरिका लागि हटाउनुहुनेछ! (यसैया २५:८ पढ्‌नुहोस्‌) त्यसोभए स्वर्ग जाने मानिसहरूले त्यहाँ के गर्नेछन्‌? उनीहरूले स्वर्गमा स्थापित परमेश्‍वरको राज्यमा येसुसितै शासन गर्नेछन्‌ भनी बाइबल बताउँछ। हामी त्यस राज्यबारे अर्को अध्यायमा सिक्नेछौँ।
^ अनु.9बाइबलमा जवान, वृद्ध, पुरुष, स्त्री अनि इस्राएली र विदेशीहरूलाई मृत्युबाट ब्युँताइएका विवरणहरू पाउँछौँ। तपाईँ ती विवरणहरू १ राजा १७:१७-२४; २ राजा ४:३२-३७; १३:२०, २१; मत्ति २८:५-७; लुका ७:११-१७; ८:४०-५६; प्रेषित ९:३६-४२; २०:७-१२ मा पढ्‌न सक्नुहुन्छ।
एक: यहोवा परमेश्‍वरले मृत्युलाई सधैँभरिका लागि हटाउनुहुनेछ
“सबैभन्दा अन्तमा नामेट पारिने शत्रु मृत्यु हो।”—१ कोरिन्थी १५:२६
कसैको मृत्यु हुँदा बाइबलबाट हामी कस्तो सान्त्वना पाउँछौँ?
२ कोरिन्थी १:३, ४
परिवारको सदस्यको वा साथीभाइको मृत्यु हुँदा हामी लाचार महसुस गर्छौँ। तर बाइबलले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ।
यसैया २५:८; २६:१९
यहोवा परमेश्‍वरसित मृत्युलाई सधैँभरिका लागि हटाउने शक्‍ति छ। उहाँले मरिसकेका मानिसहरूलाई समेत फेरि जीवित पार्नुहुनेछ।
दुई: मरिसकेका मानिसहरूलाई फेरि जीवित पारिने कुरामा हामी विश्‍वास गर्न सक्छौँ
“ए नानी, म तिमीलाई भन्छु, उठ!”—मर्कुस ५:४१
मरिसकेका मानिसहरूलाई फेरि जीवित पारिने कुरामा हामी किन विश्‍वास गर्न सक्छौँ?
येसुले लाजरसलाई फेरि जीवित पार्नुभयो।
मर्कुस ५:२२-२४, ३५-४२
येसुले एउटी सानी केटीलाई फेरि जीवित पार्नुभयो।
युहन्‍ना ११:४१, ४२
येसुले यहोवा परमेश्‍वरबाट शक्‍ति पाएर मरेकाहरूलाई जीवित पार्नुभयो।
येसुले मरेकाहरूलाई जीवित पार्नुभएको थुप्रै मानिसले देखे। येसुका शत्रुहरूलाई समेत उहाँसित त्यस्तो क्षमता छ भनेर थाह थियो।
तीन: यहोवा परमेश्‍वरले अरबौँ मानिसलाई फेरि जीवित पार्नुहुनेछ
“तपाईँले मलाई बोलाउनुहुनेछ र म जवाफ दिनेछु। आफ्नो हातको सृजना हेर्न तपाईँले तीव्र इच्छा गर्नुहुनेछ।”—अय्युब १४:१३-१५
क-कसलाई फेरि जीवित पारिनेछ?
युहन्‍ना ५:२८, २९
यहोवा परमेश्‍वरको सम्झनामा भएका सबै जना फेरि जीवित पारिनेछन्‌।
धर्मी र अधर्मी दुवै जीवित पारिनेछन्‌।
यहोवा परमेश्‍वर प्रत्येक ताराको नाम त सम्झन सक्नुहुन्छ भने उहाँ आफूले फेरि ब्युँताउन चाहेको मानिसहरूको सबै कुरा सम्झन सक्नुहुन्‍न र?
चार: कसै-कसैलाई मृत्युबाट ब्युँताएर स्वर्ग लगिनेछ
“अब म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जाँदै छु।”—युहन्‍ना १४:२
कसलाई मृत्युबाट ब्युँताएर स्वर्ग लगिन्छ?
१ पत्रुस ३:१८
मृत्युबाट ब्युँताएर स्वर्ग लगिनेहरूमध्ये पहिलो व्यक्‍ति येसु हुनुहुन्थ्यो।
मृत्युबाट ब्युँताएर स्वर्ग लगिने व्यक्‍तिहरू थोरै हुनेछन्‌ भनेर येसुले बताउनुभयो।
यहोवा परमेश्‍वरले १ लाख ४४ हजारलाई स्वर्गमा बस्नको लागि छान्‍नुभएको छ।
मरिसकेका प्रियजनहरूका लागि साँचो आशा (भाग १)
मरिसकेका प्रियजनहरूका लागि साँचो आशा (भाग २)
अर्को देशमा बसाइँ सर्ने योजना बनाइरहेका मानिसहरू र परमेश्वरको सेवकबीच केही समानता छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने मरिसकेका मानिसहरू फेरि जीवित हुनेछन्‌!
bhs अध्या. ७ पृ. ७१-८२
परमेश्‍वरले हाम्रो लागि कस्तो उद्देश्‍य राख्नुभएको छ?
अध्याय १ परमेश्‍वर को हुनुहुन्छ?
अध्याय २ बाइबल—परमेश्‍वरले दिनुभएको किताब
अध्याय ३ परमेश्‍वरले कुन उद्देश्‍य लिएर मानिसजाति बनाउनुभयो?
अध्याय ४ येसु ख्रिष्ट को हुनुहुन्छ?
अध्याय ५ फिरौतीको बलिदान​—⁠परमेश्‍वरले दिनुभएको सबैभन्दा अनमोल उपहार
अध्याय ६ मानिस मरेपछि कहाँ जान्छ?
अध्याय ७ मरिसकेका मानिसहरू फेरि जीवित हुनेछन्‌!
अध्याय ८ परमेश्‍वरको राज्य के हो?
अध्याय ९ के यो संसार छिट्टै नाश हुँदै छ?
अध्याय १० स्वर्गदूतहरूबारे बाइबलले के सिकाउँछ?
अध्याय ११ किन यति धेरै दुःख अनि पीडा?
अध्याय १२ तपाईँ कसरी परमेश्‍वरको मित्र बन्‍न सक्नुहुन्छ?
अध्याय १३ जीवनको कदर गर्नुहोस्‌
अध्याय १४ तपाईँ परिवारलाई कसरी सुखी बनाउन सक्नुहुन्छ?
अध्याय १५ परमेश्‍वरको उपासना गर्ने सही तरिका
अध्याय १६ यहोवा परमेश्‍वरको उपासना गर्ने छनौट गर्नुहोस्‌
अध्याय १७ प्रार्थना गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठूलो सम्मान
अध्याय १८ के मैले आफ्नो जीवन परमेश्‍वरलाई समर्पण गरेर बप्तिस्मा गर्नुपर्छ?
अध्याय १९ यहोवा परमेश्‍वरसित नजिक हुनुहोस्‌
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ?
अडियो अडियो डाउनलोडका विकल्पहरू बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ?